आज मिति २०७७ साल जेठ २६ गते सोमबार, तपाइको आजको राशिफल कस्तो छ त?
Home मनोरन्जन आज मिति २०७७ साल जेठ २६ गते सोमबार, आजको राशिफल कस्तो छ...
आज मिति २०७७ साल जेठ २६ गते सोमबार । आज तपाईको राशिफल यस प्रकारको रहेको छ। तपाइकाे दिन शुभ रहाेस् शुभकामना छ ।
मेष राशी – मेष राशिफल हुनेहरुको लागि आजको दिन ईज्जत तथा मानप्रतिष्ठामा मिल्न सक्ने छ । मनोरञ्जन तथा भौतिक उन्नतिको प्राप्त हुने योग छ ।आँटेको काममा सफलता मिल्ने छ । महिला वर्ग बाट सहयोग मिल्नेछ । परिवारमा सद्भाव बढ्ने देखिन्छ । आफुले गरेको कामको अरूले फाइदा उठाउन सक्छन् । परिस्थितिले गर्दा आँटेको काममा ढिला हुनेछ । सहयोगीहरूले बीचैमा धोका दिन सक्छन् ।
वृष राशी – वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सामान्य कार्यलाई पनि बढी मेहेनत गरेरमात्रै सफलता पाउन सकिने योग रहेको छ । हतारमा र विना महत्वपूर्ण कुनै कार्यमा चासो नगरेकै राम्रो हुनेछ । माया प्रेममा आत्मियताको बढोत्तरी हुनेछ । घरमा परिवारका सदस्यहरुबाट सहयोग मिल्न सकिने छ । पुराना गरिएको कामहरुबाट सोचेभन्दा बढिनै आम्दानि हुनेछ । आत्तिने बानीले गर्दा बोल्दा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ नत्र गलत अर्थ लाग्न सक्छ । हातमा रकम आउने बितिकै अरूका लागि खर्च गरेर सिद्धिने छ । अरूको सहयोग खोज्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ ।
मिथुन राशी – मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आम्दानी हुने योग छ । विशेष आर्थिक प्राप्तिमा केही अबरोध आउने छ । विशिष्ट व्यत्तिहरुसँग भेटघाट हुनाले मन प्रसन्न हुनेछ । सवारी साधन खरिद बिक्री हुने देखिन्छ । दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्नेछ । शत्रु पराजित होलान् । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने सम्भावना छ। मेहनतले नाम, दाम र इनाम मिल्न सक्छ ।
कर्कट राशी – कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन आत्मबल बढाएर र समयको सदुपयोग गर्न सकेकोमा एकदमै राम्रो अवसर प्राप्त हुन सक्छ । नयाँ कामको सुरुवात गरि मान्छेको ध्यान आफुतिर आकर्षित पार्न सकिनेछ । राम्रोसँग योजना बनाएर काम गरेमा सबै कार्य सफल हुदै जानेछन् । आकस्मिक उपहार प्राप्त हुनसक्ने योग छ । टाढा रहेकाका साथीभाइबाट काममा साथ मिल्ने छ ।
सिंह राशी – सिंह राशि हुनेहरुको लागि आज दिन सात्त्विक विचार र आस्था बढ्नाले धार्मिक कार्य गर्न सहज हुने योग छ । व्यापार व्यवसायमा र आफ्नो पेसामा सफलता मिल्ने छ । राज्यबाट मान सम्मान मिल्ने छ । घरमा आफन्तको आगमन हुनेछ । बोलीको प्रभावले कार्य सम्पादन हुनेछ । दिगो कामको सुरुवाट हुनेछ र छोटो समयमा नै ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ।
कन्या राशी – कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन रोकिएको अधुरो काममा सफलता मिल्ने छ । धनआर्जनको नयाँ स्रोतहरु पत्ता लाग्नेछन् । आजको समय बढी प्रेरणादायक हुनेछ । समय नमिल्दा कार्य अधुरै रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू निकै सक्रिय हुने देखिन्छ । आजको दिन त्यति अनुकूल भने देखिएको छैन । ग्रहको प्रतिकूल आसरले तपाईको स्वास्थ्यमा असर गर्नसक्ने छ ।
तुला राशी – तुला राशि हुने हरुको लागि आजको दिन भौतिक सुखदय हुने र सेवा प्राप्त हुने छ । जीवन साथीको सहयोगले आजको दिन रमाइलो बन्ने देखिएको छ । इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने योग छ । प्रेमीको सहयोग मिल्ने छ । दाम्पत्य जीवनमा समझदारी बढ्ने छ । शुभ समाचार सुन्न अवसर मिल्ने छ । खानपिनमा ध्यान दिनुहोला नत्र स्वास्थ्यमा गडबड हुन सक्छ ।
वृश्चिक राशी – वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन पराक्रम बढ्ने देखिन्छ तर अनावश्यक घमण्ड गरेमा समयको दुरुपयोग हुने डर पनि हुनेछ । मनमा दुविधा उत्पन्न हुने देखिन्छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि निकै नै संघष गर्नु पर्ने देखिन्छ । व्यापार-व्यवसायमा अबरोध आउनेछ । खानपानमा असावधानीले गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल रहला । आम्दानी रोकिनाले केही योजना असफल हुन सक्छन् । काम बिग्रने डरले सताउने छ ।
धनु राशी – धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ज्ञान क्षमताको बल देखाउने अवसर मिल्ने छ । विद्याको सदुपयोग गर्नसकिने र प्रशंसा पनि मिल्ने देखिन्छ । अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्ने योग छ । परिवारमा शान्ति प्राप्त हुने देखिन्छ। आयआर्जनको क्षेत्रमा पनि सुधार आउने देखिन्छ । पठनपाठनमा प्रगति होला । बोलीको प्रभावले गर्दा फाइदा उठाउन सकिने छ ।
मकर राशी – मकर राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन प्रेममा सफलता मिल्ने योग छ । अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउने देखिन्छ । आफन्तबाट सहयोग मिल्नेछ । कला र गलाको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धी बढ्नाले धेरै अबरोधहरु आउनेछन्। काममा बाधा पुर्याउनेहरू धेरै भेटिने छन् । आजको दिन निकै नै ख्याल राख्छनु पर्ने देखिन्छ । जिस्किदा जिस्किदै कसैसँग विवाद हुन सक्नेछ । काममा अबरोध आउन सक्ने र आरोप खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुम्भ राशी – कुम्भ राशिफल हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिनेछ। शुभकार्यको चर्चा चल्ने नै छ । मनमा हर्ष,उमङ्ग र उत्साह छाउने देखिन्छ । तपाइको श्रमको उचित मुल्याङ्कन हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध विवाहमा परिणत हुन योग छ । स्वास्थयमा गडबड हुनाले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिले काम गर्न कठिनाई हुनेछ।
मीन राशी – मीन राशिफल हुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन लक्ष्मी तथा सरस्वती दुवैको कृपा प्राप्त हुने योग छ । काममा दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । घर परिवारमा झै–झमेलाको अवस्था उत्पन्न हुने छ । सामानहरू छुट्ने–हराउने सम्भावना निकै बडी छ । दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च देखिन्छ । तत्कालको फाइदा हेर्दा परिस्थिति बिग्रन सक्नेछ ।
Previous articleहिमानी कोषले फेरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्यो ठुलो सहयोग !
Next articleसांसदहरुकाे आराेप : क्वारेन्टिन जेल र गोठ जस्तो भयो